Hot zọ Foil Suppliers na Factory - China Hot zọ Foil Manufacturers
1.Product Code: YS-1027 2.Width: 1260CM 3.Material: PET 4.Thickness: 0.028mm 5.Specification: 500M / roll ma ọ bụ ahaziri 6.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Design Hot Stamping Foil 1.PVC marble na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-atụkarị akwụkwọ na marble UV na ogwe. 2.Ọ nwere ike ịbụ ụkpụrụ marble dị elu, ọka na ụdị usoro achọrọ. 3.Mgbe nnyefe ihe nkiri nke UV, ihe mkpuchi Pu nwere ezigbo adhesion. 4.This ngwaahịa adabara a dịgasị iche iche nke substrates nke nyefe usoro, b ...
Product Code: YS-1034-5 Obosara: 1.26M Product Structure: PITA film + Off oyi akwa + The echebe oyi akwa + Ji achọ oyi akwa + Ichekwa oyi akwa ọkpụrụkpụ: 0.028mm nkọwapụta: 500M / mpịakọta ma ọ bụ dị ka chọrọ. MOQ: 5000M / Code YS BRAND UV marble ọka nyefe ihe nkiri maka bọọdụ UV. 1.A ngwaahịa a kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ihe ntanetị dị iche iche nke usoro mbufe, kamakwa maka ọtụtụ mkpuchi dị iche iche nhazi ma ọ bụ ihe nkiri. The elu nke UV ji achọ osisi bụ ihe mgbaze-free gburugburu ebe obibi-echebe agba, w ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1046 3.Material: PITA + UV Agba 4.Specification: 500M / Roll 5.MOQ: 5000M / Code 1.YS BRAND UV Mable Hot zọ Foil 2.PVC marble hot stamping foil dabere na ahịa pụta na a dịgasị iche iche nke dị iche iche post-nhazi mkpuchi chọrọ na nnyocha na mmepe mgbe a ike adhesion nke ọhụrụ ngwaahịa. 3. Na mgbakwunye, mgbe UV chachara, ekweghị ya na-ukwuu mma, ọzọ na-eyi na-eguzogide ma ọkọ-eguzogide ọgwụ, na a ga-ọzọ-egbu maramara. Ngwaahịa a bụ uwe ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1052-2 3.Material ET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Grain Okpomọkụ Nyefee Foil 1. Ngwaahịa a na-etinye maka UV ji achọ osisi , nke a na-ejikarị na KTV, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, nkwari akụ, klọb, ụlọ oriri na nkwari abalị, ụlọ ahịa na ebe ntụrụndụ ndị ọzọ dị elu na mgbidi mma! 2.Ọ nwere ike ịbụ ụkpụrụ marble dị elu, ọka na ụdị usoro achọrọ. 3.Mgbe nnyefe ihe nkiri nke UV, ihe mkpuchi Pu nwere ezigbo adhesion. 4.This ngwaahịa kwesịrị ekwesị ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1083 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Design Hot Stamping Foil The Marble okpomọkụ nyefe film ngwaahịa a ga-etinye nwayọọ, n’uche na n’iru, ma ọ bụghị n’uzo; ekwesighi itinye ha na nso ebe ikpo oku, ma edebe ha ka ha ghara ikpo oku, n'ozuzu ha na 25 ℃; ekwesiri igbochi ha ka ha ghara imebi. Ozugbo ha kwụsịrị, ha ga-ewepụta gas n'okpuru oke okpomọkụ na sou ...
1.Width: 0.64 mita / 1.26Meters 2.Code: YS-1526 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code PVC marble hot stamping foil Ihe nkiri na-enyefe ọkụ nwere ihe pụrụ iche. Iji nweta ezigbo ọkụ zọọ mmetụta, anyị ga-nditịm ịchịkwa kacha mma okpomọkụ, nsogbu na ọsọ. Ọ nwere usoro nhazi usoro siri ike: Mkpebi nke okpomọkụ: mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị oke ala, ọ ga-egosi na stampụ ọkụ adịghị na ma ọ bụ na ọ bụghị nke siri ike, ọ ga-emekwa ka akara akara ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YSD-1534 3.Material ET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Hot Stamping Foil Ihe nkiri ikpo ọkụ nwere ihe pụrụ iche. Iji nweta ezigbo ọkụ zọọ mmetụta, anyị ga-nditịm ịchịkwa kacha mma okpomọkụ, nsogbu na ọsọ. O nwere usoro ntinye ederede siri ike: Mkpebi nke nrụgide: nrụgide stampụ bụkarị 4-6 kg / cm2. Mgbe nrụgide pere oke mpe, ọ nweghị ike ịme ihe nkiri ọkụ na-ekpo ọkụ na-agbaso su ...
1. Product Code: YS-1098 2. Brand Brand: Shengpai 3. Obosara: 1260mm 4. Ihe: PITA 5. ọkpụrụkpụ: 0.028mm 6. Nkọwapụta: 500M / ROLL 7. MOQ: 5000M / Code 8. Nkọwa nkọwa: katọn 9. Tụkwasịnụ Ikike: 200000 SQM kwa ọnwa 10. Elu: elu gloss, Mat, embossed 11. Trade Okwu: FOB & CIF & EXW YS BRAND UV Wood Grain Design Hot Stamping Foil 1. PVC hot stamping foil na-adabere na ahịa pụta na ihe dị iche iche mkpuchi mkpuchi nhazi na nyocha na mmepe ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1548 3.Material ET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND PVC Marble Sheet Hot Stamping Foil 1.PVC marble hot stamping foil bụ ụdị ọkara ihe na usoro mbufe ọkụ. Usoro nke ịnyefe ọkụ na-ebufe akwụkwọ bụ ịnyefe usoro ihe ịchọ mma n'elu ihe eji achọ mma n'elu ihe eji eme ụlọ site na ikpo ọkụ ihe nkiri na-ebufe otu oge. 2.Ọ nwere ike ịbụ nnukwu ụkpụrụ marble, ọka an ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1572 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code SP YS Marble Design Stamping Foil 1.PVC marble hot stamping foil dabere na ahịa pụta na ụdị mkpuchi mkpuchi dị iche iche dị iche iche chọrọ na nyocha na mmepe mgbe ịmachiri ngwaahịa ọhụrụ. The Marble ụkpụrụ nwere ike n'ime a picture na otu oge site na iji okpomọkụ nyefe film ebi akwụkwọ, na-enweghị agba kenha, na ezi uche ụkpụrụ e nwere ike e biri ebi site mfe ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1581 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code 1.YS Wood Grain Wall Board Hot zọ Foil 2.PVC Osisi Nlereanya ọkụ zọ foil. dabere na ahịa pụta na a dịgasị iche iche nke dị iche iche post-nhazi mkpuchi chọrọ na nnyocha na mmepe mgbe a ike adhesion nke ọhụrụ ngwaahịa. 3.Ọ nwere ike ịbụ ihe nkedo dị elu dị elu, na ụdị usoro dị iche iche. 4.Mgbe mbufe ihe nkiri nke UV, mkpuchi PU nwere ezigbo adhesion. 5 ...
1.Width: 1.26Meters 2.Material ET 3.Specification: 500M / ROLL 4.MOQ: 5000M / Code YS BRAND PVC Marble Sheet Hot Stamping Foil 1. Okpomọkụ mbufe obibi bụ usoro obibi akwụkwọ ọhụrụ. E kewara usoro obibi akwụkwọ ụzọ abụọ: nyefe akwụkwọ ntanetị ihe nkiri na nhazi usoro. Patternkpụrụ ahụ bu ụzọ ebipụta n’elu ihe nkiri ahụ. Printedkpụrụ e biri ebi bara ọgaranya na ọkwa, na-enwu gbaa na agba, dịgasị iche iche, obere na agba dị iche na ezi na reproducibility. Ọ nwere ike izute ihe achọrọ nke imewe ahụ ...